दयाहाङ भन्छन् सिक्वेल चलचित्र घातक, प्रदिप भन्छन् दर्शकले माग गरेकोले बनायौं
लेन्सनेपाल २०७६ बैशाख २९
अभिनेता दयाहाङ राईले सिक्वेल चलचित्र चलचित्रकर्मीका लागि घातक हुने बताएका छन् । सिक्वेल निर्माण गर्नु भनेको चलचित्रकर्मी आफैले आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हाने बराबर भएको जिकिर समेत गरेका छन् ।
सिक्वेल भन्दा साथ दर्शकको अपेक्षा बढ्ने र यस्तो हुनुपर्छ भन्ने पूर्वानुमानका कारण घातक हुन पुगेको उनको भनाई छ । अक्सर सिक्वेल हिट चलचित्रकै बन्ने गर्छन । दर्शकले मन पराएका चलचित्रको सिक्वेल बन्दा अपेक्षा पनि बढ्नु स्वभाविक छ । सायद यसैले होला दयाले अपेक्षा नराखि किन ‘जात्रै जात्रा’ हेर्न आग्रह गरेका छन् । अपेक्षा राखेर जाँदा त्यो अपेक्षा पुरा हुन नसक्ने र आफुले समेत दर्शकको अपेक्षा पुरा हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने उनको भनाई छ ।
‘जात्रै जात्रा’ सन् २०१६ को सफल चलचित्र ‘जात्रा’को सिक्वेल हो । दयाले भनेझै घातक अनि आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने काम निर्देशक प्रदिप भट्टराईले किन गरे त ? उनी यसलाई दर्शकको माग भन्छन् । जात्राको अन्त्यमा नखुलेको जवाफ यसमा भेटिने निर्देशक प्रदिप भट्टराईको भनाई छ । ‘जात्रा’ हेरेपछि दर्शकहरुले निरन्तर रुपमा २ करोड ८० लाख कहाँ हरायो ? बैंक बाट निस्केको कसरी नक्कली भयो ? पैसा कहाँ छ ? जस्ता प्रश्न उठाएको र ति प्रश्न समेतको जवाफ दिनका लागि सिक्वेल बनाएको उनको भनाई छ । तर, त्यसको जवाफले मात्र पनि चलचित्र नबन्ने भएकोले अर्को ‘जात्रा’ पनि थप गरिएको प्रदिप बताउँछन् । ‘जात्रा’मा पैसाको जात्रा देखाएको र ‘जात्रै जात्रा’मा सुनको जात्रा हुने उनी बताउँछन् । २ करोड ८० लाखको जात्रामा सुन थपेर ‘जात्रै जात्रा’ बनाइएको छ । तर, नेपालमा चर्चामा आएको सुन काण्ड क्यास गर्न भने यो चलचित्र नबनाएको प्रदिपको भनाई छ । उनी यसलाई आफ्नै जात्रा मान्छन् ।
जेष्ठ ३ गतेबाट चलचित्र प्रदर्शन हुँदैछ । चलचित्रमा विपिन कार्की, रविन्द्र झा, रविन्द्र सिंह बानिया, दयाहाङ राई, वर्षा राउत, राजाराम पौडेललगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ । चलचित्रमा विपिन ट्याक्सी ड्राइभर र वर्षा पानीपुरी पसले भएको खुलेको छ अन्य क्यारेक्टर भने खुलाइएको छैन ।
Know more about Nepali Movie 'Jatra'
Know more about Nepali Movie 'Jatrai Jatra'
‘सूर्य इन्टरनेशनल अवार्ड’को मनोनयन सार्वजनिक
चलचित्र ‘मखमली मखमली’को गीत सार्वजनिक
उपराष्ट्रपतिले दिए कलाकारहरुलाई सहयोगको बचन
‘मेरो दिल छ पोखरामा’ पौष ११ मा
क्यानडामा हुने ‘सिने स्टार अवार्ड ’ को लागी दर्ता आह्वान
स्टारडमले दबाबमा राख्छ – पुजा शर्मा